तीजको कथा - शखदा साहित्य
नेपाली हिन्दूनारीहरूको महान चाड तीज यसरी आउँछ नेपालको शहरमा, शहरको के भन्नु नाम मात्रको शहरलाई गाउँघरमा तीजको रमझम यसरी सुरु हुन्छ -
सुरूमा नारी सामाजिक सँघ, सँस्थाबाट तीजको कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।
पहिलो दिन - दर खाने
देास्रो दिन- नृत्य प्रतियोगिता
तेस्रेा दिन- नारी शक्तिकरण विषयमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता
चौथो दिन- रक्तदान कार्यक्रम
पाँचौ दिन- नारीहरूको अधिकारबारे कानूनी सल्लाह गोष्ठी
पाँचौ दिने कार्यक्रम मिटिङ्गबाट पारित हुन्छ ।
' तीजमा नाच्नलाई चुरा र धागो चाहिँ एउटै मिलाएर किन्नु पर्छ है साथी हो !'
' दिदी, यसपाली तपाईको रातो साडी छ भने दिनोस् है । कति एउटै साडी लगाएर माइत जानू, पूरानो डिजाइन भइसक्यो । नयाँ किन्न सकिएको पनि होइन । '
' यसपाली त हाम्रो तीज मान्नै भएन जेठाजू खस्नु भएको छ ।'
'साहुजी, तिलहरी चाहिँ चाँडै सकिदिनु है । पोते उन्न ढिला हुन्छ नि !'
' आफू त पन्ध्रदिन देखि तीजको दर खाँदाखाँदा घर भात राम्ररी खान पनि पाएको नै छैन ।'
'काकी तपाईँको त छोराको बिहे गरेको पहिलो वर्षएक सेट लुगा त सासूलाई ढोग्न दुलहीले ल्याउँछिन होला नि ।'
'तीजको लागि नयाँ नेकलेसको सेट किनी दिनुपर्छ है् हजूर । सबै दिदी बहिनी कस्ता बनिएर आँउछन् । आफ्नो त उही पुरानो बिहेको नेकलेस कति लगाउनु हाउ । '
' आ अब त सुन लगाउने जमाना पनि गयो । ग्यारेन्टीवाला किन्यो नयाँ नयाँ डिजाइनको अनि फेरिफेरि लगायो ।'
'पोहोर पशुपतिको भीड मेरो भाउजुको नेकलेस झण्डै फुस्काएर लगेनछ चोर मोराहरूले ।'
'मेरो श्रीमानको त तीजमा म माइत गए भनेघरमा बास नै हुँदैन । त्यसैले मलाई माइत जान नै मन लाग्दैन ।'
'भाउजू तपार्इँको माइतबाट लिन को आउँछन् -'
'आफ्नो त भएको एउटा दाजू पनि विदेशमा हुनुहुन्छ अरु को आउथे र -'
' म माइत गएको बेला टिल्ल खाएर मातेर घर आउने चाहिँ होइन नि बुझ्यिस्यो थाहा छ कि - '
तीज आयो कि मेरो बूढाको त मुख नै अँध्यारो हुन्छ । तिम्रो तीजले मेरो वर्षदिनको बजेट नै डामाडोल हुन्छ भन्नुहुन्छ । '
'रमिला भाउजूले तीजमा लाउन पाँच हजारको साडी किनेकी छिन रे ।'
' साडी मात्र के कुरा गछ्यौ- साडीलाई सुहाउने अरु गरगहना त केके हो केके । '
'कमाइ हुने श्रीमानले त किनी दिन्छन् नि । आफ्नो त के गर्नु चाडबाड पनि नआए हुन्थ्येा जस्तो लाग्छ । आफूलाई किन्यो छोराछोरी नाङ्गै हुन्छन् भने जस्तो लुगा नै हुँदैन । छोराछोरीको मुख हेर्यो आफ्नो रहर नाङ्गै ।
' आफ्नो त माइत पनि यति टाढा छ मेची र महाकाली छ कसरी तीजमा जानु नि बन्द र चक्काजामले हैरान पार्छ ।'
'होइन यो दर खाने दिन चाहिं किन विदा नदिएको होला सरकारले । दर नखाई कसरी भोकै बस्न सकिन्छ व्रत ।'
'पहिला पहिला यही शरीर हो दिनभरी पानी सम्म नखाई व्रत लिइन्थ्यो । अहिले त साह्रै हम्मे पर्छ बा । उमेरले डाँडाँ काटेर पो हो कि । '
' कहाँ उमेरले मात्र हुन्थ्यो - अहिले खाना पिनामा हेनोर्सन कस्तो मिसावट छ । चोखो र शुद्ध केही खान पाइदैन । '
' हो त दिनभर केही नखाइ त बस्न नै सक्दिन बा । हल्का जूस र फलफूल खाइनँ भने भुतुक्कै हुन्छु बा ।
'को नखाइ भनेको छ कोल्डडि्रङ्कस त खान भइ हाल्छ नि । ' पानी पो खान हुदैन नि !'
' म पनि हल्का जूस र फलफूल खान्छु तर अरूलाई चाहिँ ढाँटेर खादिनँ भन्छु अहिलेको जमानामा पनि को भोकै बस्छ । के गर्नु खान्छु भन्यो भने खिल्ली उडाउँछन् । उनीहरू पनि खाँदा होलान् नि ।'
'पुरुषहरू हाम्रो नाममा व्रत लिएर भोकै बस्छन् र - म त टन्न खान्छु । मेरो श्रीमानले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ । तीजमा भोकै बस्नै दिनुहुन्न । तिमीलाई ग्याष्टिकले सारो पार्छ भन्नु हुन्छ ।'
'लोग्नेको आयू बढ्छ । शिवजीको आराधना गरेर भोकै बसेर व्रत लियो भने तर अहिलेको आइमाइहरू कस्ता खरा कुरा गर्छन् हाम्रो जस्तो समय हो र -'
'अनि पति नहुनेले चाहि किन व्रत लिएका त -'
'उनीहरूले शिवजीलाई खुसी पार्न लिएका नि । श्रीमानको परलोक पनि सुखमय होस भनेर रे ।'
'ए लोग्ने मान्छेले हाम्रो यही जुनीलाई नर्क बनाएर मोजमस्ती गर्दै हिँडछन् अनि हामीचाहिँ उनीहरूको परलोक पनि र्स्वर्गै होस् भनेर व्रतलिने ।'
' भो । भो । यो व्रत पूजापाठको जमाना गयो । अब समानताको जमाना आएको छ ।'
' यो नारी पुरुष समान भन्ने कुरा, कुरा मात्र होला व्यवहार मा त खोई ।'
'ब्यवहारमा ल्याउने हो भने तीज मान्नै हुँदैन नि '
'तीज मानिएन भने हाम्रो दिदी बहिनीको भेटघाट चाहिँ कहिले हुने नि । अनि मीठो खाने राम्रो लाउने कहिले नि !'
' खै यस्ता कुरा गर्दै गयो टाउको दुख्छ बरु केही नसेाच्यो लोग्नेले कमाएर ल्याएकै छन् । उनीलाई पनि कमाउन छोराछोरी पढाउन कति धौ धौ छ । मीठो खायो । खुसी भन्यो रमायो आनन्दले बस्यो ।'
'यी जाड्याहा लोग्नेले कहाँ पाल्छन् र दुइचार पैसा कमाउन थाल्यो कि वियर र सेकुवामा सक्छन् । अनि तरुनीलाई खुवाएर सक्छन् । हैन तरुनी भनेपछि चाहिँ कति मरेहत्ते हालेको यी लोग्नेमान्छेहरू, झन तीजको बेला तँ मीठो खान्छस् म चाहिँ खानु रमाइलो गर्न नपाउनु भनेर निहुँ खोज्नु पो थाल्छन् ए गाँठे ! '
' ए दिदी तपाईँका तीजका चुरा धागो र व्लाउजको सेट मिल्यो - '
' सुशीलाका जेठानी देउरानी त देखासिकी गरेर लाउँछन् । को भन्दा को कम भएर '
' गायत्रीको अगाडि त कसैले राम्रो साडी र गहना लगाउनै हुँदैन मुख लेपारीहाल्छे बई । '
'हैन अहिले घरमा हो कि कहाँ - गीत बजिरहेछ त -'
'हैन डार्लिङ घरमा नै हो यो हल्ला त टिभीको हो - '
' टिभी बन्द गर्दा हुदैन त - कि रेष्टुरेन्टमा हो - '
'हृोइन, होइन तिमीलाई किन ढाटनु -
'अनि भुजा खाइस्यो । फ्रिजमा चिकेन रोष्ट राखिदिएछु नि ! '
' ए ! त्येा खाइसकेर टिभी हेर्दैछु । तिमी चिन्ता नगर न तीज राम्ररी मानेर आउ ।'
' चाडै मन्दिरमा दर्शन गरेर कार्यक्रममा नाच्नु पुग्नु पर्छ है ।'
'पोहोरको भन्दा राम्रो नाच्नु पर्छ नि !'
'ए ! केटा हो मन्दिर जाने होइन क्या च्वाक केटीहरू आउँछन् । साइड मार्न मजा आउँछ ।'
'यी तरुनीहरू पनि किन भाङ धतुरो खाने शिवजीको मन्दिर धाएका होलान् । हामी सद्धे केटाहरू हुँदाहुँदै ।'
'ए यार ! पोहोर त एउटी क्या च्वाक सँग साइड मारेथे । के गर्नु बोल्ने मौका नै परेन । अप्सरा जस्तै थिई ।'
' त्यो केटीलाई शिवजीले जोगाएछ् त जस्तो मरनाच्यासे सँग त फसिनछे ।'
'ओई नकरा ! कति जना भुतुक्क हुन्छन् तलाईँ के थाहा आफू छस् पशुपतिको बाँदर जस्तो अनि अरूलाइ पनि त्यस्तै देख्छस् ।'
' यो तीजमा त बाटाघाटा मन्दिर, बजार चारैतिर रातै हुन्छ । मलाई त यो रातो रङ्गदेखि एलर्जी हुन्छ ।
' ए ! यो साले कस्तो कुरा गर्छ रातो रङ्गमा एलर्जी हुन्छ रे । त्यही रातो रङ्गमा कत्रो शक्ति छ । 'भैगो छोडदे यो हिजडा जस्तो कुरा गर्छ । मलाई चाहि' तीजमा दिदी लिन जान एलर्जी हुन्छ । दिदीकी सासूले नानाथरी गफ गरेर क्या वोर गर्छिन । लिन नजाऊ भएन । पोहोर त उनको आफन्तको एउटी छोरीसँग कुरा मिलाउन ठिक्क परेकी थिइन् ।'
' जे होस् तीजको बहानामा हाम्रो घरमा चाहिँ मीठामीठा खानेकुरा पाक्छन् ।'
'के गर्नु तीजमा आफू माइत गइन्छ । छेारा छोरी र श्रीमानको चाहिँ विदा हुँदैन घरमा हेरिदिने कोही हुदैनन् ।
' ए हजूर बेलुका आउदा छेाराछोरी लिएर माइत आइसक्यो है । मैले नानीहरूका फेरफार गर्ने कपडा बोकेर गएकी छु ।'
' यो तीजमा कहिले चेलीबेटीलाई खुसी पार्न सकिएन बा । जस्तो राम्रो साडी किनिदियो मुख खुम्चाउँछन् । हामीले बाउको सम्पत्ति खाएको रिस गर्छन । '
'आफ्नो त दाजूभाइ पनि कोही छैनन । तीजमा माइत जान रहर लागेर उधूम हुन्छ कहाँ
जानू र ।'
ए तरुनीवरुनी हो नाच है हामी ताली मार्र्छौ हाम्रा नाच्ने दिन गै गए ।
तयार छौ हैन ,
भगवानको भजन पो गाउनुपर्छ त योफिलीमसिलीमको गीतमा के नाचेका होलान् ।
मादल बजाउने तयार छौ हैन
ल ल सुरु गर ... ..तीजको लहर आयो बरी लै ........
hamro samaj ko original picture.